Soomaaliya oo taageertay howlgalka Turkiga ee Afrin – Radio Daljir
Janaayo 27, 2018 4:51 b 0
Dowladda faderaalka ee Soomaaliya ayaa muujisay inay siwayn ay u taageersantahay howlgalka militari ee Turkiga uu ka wado wadanka Suuriya, gaar ahaana waqooyiga dalkaasi deegaanka dhaca ee Afrin.
Wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Cawad oo la hadlay wakaaladda wararka Anadolu ee Turkiga isagoo oo ka qaybgalaya shirka diblumaasiyiinta sare ee Afrika ee kasocda Addis ababa oo lagu dajinayo ajandaha kalfadhiga sodonaad ee madaxda Afrika ayaa sheegay inay dowladda ay taageerayso howlgalka Turkiga/
“Aad ayaan u taageersanahay ololaha militari ee Turkiga uu qaaday ee Afrin” ayuu yiri wasiirka.
“Turkiga waxaa uu xaq u leehay inuu isdifaaco” ayuu yiri wasiirka oo dhanka kalle sheegtay wasiirka arimaha dibadda ee Turkiga inuu la xiriiray oo uu u muujiyay taageerada Soomaaliya.
Waxaa uu ku amaanay madaxda Turkiga inay Soomaaliya ay caawiyeen xilli aanay haysan wax taageere ah.
Dowladda Turkiga ayaa Sabtidii qaaday howlgalka Oliva Branch, kaasi oo lagula dagaalamayo kooxaha PYD/PKK iyo argagaxisada Daacish ee waqooyiga Suuriya, laguna adkeeynayo xuduudda Turkiga, waxaana dhanka kalle uu howlgalka uu difaacayaa shacabka Suuriya ee ay dhibaateeyaan kooxaha argagaxisada ee deegaankaasi jooga.